Ederede Nsogbu Nsogbu, Lee Nzọụkwụ Site Nzọụkwụ Nzọụkwụ na Ihe Nlereanya: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
Ederede Nsogbu Nsogbu, Hụ Nzọụkwụ Site Nzọụkwụ Nzọụkwụ na Ihe Nlereanya
Ederede nsogbu nsogbu bụ ụdị nkwenye na-ewu ewu. N'ime edemede ndị a, ị ga-akọwa otu nsogbu, mee ka onye na-agụ ya chebara nsogbu ahụ echiche, tụpụta azịza ya, ma dịrị njikere ikposa nkwenye ọ bụla.
Nke a na ọtụtụ ndị ọzọ dị ka usoro-site-zoo ndu, M ga-na ihe nke isiokwu a guputa gị. Ka anyị buru ụzọ chọpụta isi ihe ndị a tupu anyị aga n'ihu.
Kedu ihe bụ Ngwọta Ngwọta Nsogbu?
Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Webata Nsogbu Ahụ
Mee Ka Ọgụgụ Agụụ
Gosipụta Ngwọta Gị
Agba a ikpeazụ Foto
Kedu otu esi ede mmechi maka esemokwu nsogbu?
Kedu ihe atụ nke Edemede Nsogbu na Ngwọta?
Ọrịa Ọmụma na Temụaka
A na-eji edemede edemede nsogbu na-akọwa nsogbu na usoro iji dozie ya. Ọ bụ edemede arụmụka nke i bukwa n’ozi iji kwenye uche mmadu. Ọ kachasị ị na-achọ ime ka onye na-agụ ya kwenye otu ihe.
N'ịkọwa nsogbu ahụ, onye edemede na-enyekwa ihe ngwọta iji dozie nsogbu ahụ nke nwere ike ime ka echiche onye na-agụ ya kwenye. Dị ka onye edemede, ọ dị gị mkpa iwepụta ọtụtụ ihe ngwọta maka otu nsogbu.
Ngwọta Ngwọta Nsogbu: Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
A ezi nsogbu ngwọta edemede ga-ewepụta azịza enwere ike itinye n'ọrụ ọfụma ma ọ ga - edozi nsogbu ahụ n'ezie. Kwesiri izere ihe ọ bụla na-ara ahụ ma rapara na nsogbu a kapịrị ọnụ na usoro a kapịrị ọnụ.
Nke a bụ usoro gị maka ihe ịga nke ọma:
1. Webata Nsogbu ahụ
Na paragraf nke mmeghe gị, ị ga-eji nlezianya gosipụta nsogbu ahụ. Kedu ihe ọ bụ na gịnị kpatara ọ ji chọọ idozi ya? Mgbe ịmechara nke a, kwuo okwu edemede gị. Na edemede ndị a, tesis gị ga-abụ azịza gị maka nsogbu a. Kwuo ya nkenke n’otu ahịrịokwu ma ọ bụ abụọ.
2. Mee ka Onye Ọgụgụ Nlekọta
Akọwala nsogbu ahụ na nkọwa nkọwa. Have ga-akọwa ya site n’anya ndị na - agụ ya. Webata isiokwu a otú ga-eme ka onye na-agụ ya nwee mmasị. Gịnị kpatara nsogbu a? Gịnị mere ha kwesịrị iji lekọta ha?
Enwere ọtụtụ ụzọ iji rata ndị na-agụ akwụkwọ. Nye ọnụ ọgụgụ dị egwu nke ga-eju ha anya inwe mmasị na mberede. Kesaa akụkọ nke sitere n’obi nke ga-adọkpụrụ n’obi ihe ntakịrị. Ma ọ bụ, kọwaa otú nsogbu si si n'okwu ụwa na-akpata ihe bara uru.
3. Depụta ihe Ngwọta Gị
Ozugbo i debanyere okwu mmeghe gị, oge eruola ka ị banye n'ime ahụ edemede. Dabere n'ogologo achọrọ, ị nwere ike ịchọrọ maka paragraf atọ siri ike na-atụle azịza ya.
N'ezie, ị ga-amalite n'ụzọ doro anya. Kọwaa ihe ngwọta gị na okwu dị mfe nke onye ọ bụla nwere ike ịghọta. Nye ọtụtụ nkọwa dịka o kwere mee banyere otu nke a ga-esi dozie nsogbu ahụ na-enweghị isi okwu na-enweghị isi.
N’ebe o kwere mee, dee ihe akaebe banyere azịza gị. Nye ihe atụ ebe ihe ngwọta ndị yiri ya rụburu ọrụ. Cite echiche ndị ọkachamara, ọnụ ọgụgụ, na ọmụmụ ihe.
Ọ bụrụ n ’ị na-atụpụta azịza ọhụụ ọhụụ emebeghị nchọpụta tupu, ị nwere ike ịdabere kpamkpam na arụmụka ezi uche dị na ya. Kọwaa ihe kpatara i ji chee na azịza gị ga-arụ ọrụ.
Ka ị na-akpa ahụ nke edemede gị ọnụ, buru n'uche ngwa ngwa ngwa ngwa. Kedu onye ga-akwụ ụgwọ azịza gị? Olee otú oge ọ ga-ewe? Y’oburu n’itughari ihe ndi doro anya, bido ime ka edemede gi bia na mmeghachi omume puru iche na ikike ndi a nkatọ.
4. Agba a ikpeazụ Foto
Ugbu a, ọ bụ oge iji weta edemede ahụ na njedebe. Kọwaa usoro ndị ọzọ ga-emerịrị ozugbo. Jiri ihe osise doro anya gosipụta ihe ụwa ga - adị ka emechara arụ ọrụ gị.
Offọdụ ụzọ kacha mma iji mechie edemede bụ iji ajụjụ ajụọ ajụjụ dịka, “Nke a ọ bụghị ụdị ụwa niile anyị na-achọ ibi na ya?” Ma ọ bụ, ị nwere ike kpọọ ụdị ụfọdụ nke oku ime ihe. Gwa ndị ọzọ ka ha sonyere gị, ma ọ bụ duga ha ebe ọzọ maka ozi ndị ọzọ.
Etu esi amalite nsogbu Ngwọta nsogbu
Edemede ọ bụla nwere ezigbo mmalite na-enweta mmasị ndị na - agụ ya. Iwebata n’edemede a dị mkpa dịka aha onye ọ bụla. Enwere ụzọ dị iche iche iji bido iwebata na akwụkwọ nsogbu.
Okwu mmeghe gị aghaghi ịkọwa nsogbu ahụ na ihe kpatara mkpa iji dozie nsogbu ahụ. Maka okwu mmeghe, ị ga-amarịrị:
Ọ bụrụ na ị họrọla nsogbu nke ndị mmadụ anaghị ekwukarị banyere ya, mgbe ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ kọwaa nsogbu ahụ n'ụzọ zuru ezu na mmetụta nke nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na nsogbu a bụ nke a na-ahụkarị, mgbe ahụ, ọ dị mkpa karịa ka ị weta nkọwa doro anya nke nsogbu ahụ ka ndị na-agụ ya wee nwee mmasị na edemede gị.
N’ọnọdụ abụọ ahụ, uche onye na-agụ ya ga-abụ ihe mbụ gị ịbụ onye edemede.
Ihe odide gị ga-ekwenye ma gosipụta mkpa siri ike maka idozi nsogbu ahụ.
Ozugbo ị họrọ nsogbu ahụ ma mara ụdị nke ọ na-emekarị ma ọ bụ na ọ bụghị, ị kwesịrị ikpebi oghere dị mma. Openingmeghe dị mma nwere ike ịbụ ihe ọ bụla dịka ihe mere eme n'ezie, eziokwu, na ọnụ ọgụgụ, wdg. Ọtụtụ ndị edemede na-eji oghere ndị a maka edemede ha:
Ahụmahụ onwe onye.
Echiche ahụ gosipụtara nsogbu na mmetụta ọ nwere.
Eziokwu na onu ogugu. Ndị na-agụ akwụkwọ na-adọrọ mmasị karị ọnụ ọgụgụ metụtara nsogbu ọ bụla.
I nwekwara ike kwuo ihe kpatara nsogbu ahụ.
Rụtụ aka na akwụkwọ, ihe nkiri, ihe nkiri TV metụtara nsogbu ahụ.
Ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara Otu esi amalite nsogbu Ngwọta Nsogbu
Mgbe ịhọrọ oghere, ị ga-ede ahịrịokwu. Ahịrịokwu dị n’ahịrị bụ ahịrịokwu na-egosi nsogbu na azịza ya n’ụzọ ziri ezi. O nwere ike ịbụ na mbido, n’etiti etiti okwu mmeghe gị maọbụ na ngwụcha.
Fọdụ ndị edemede na-ahọrọ itinye ahịrịokwu na-ese okwu na njedebe. Ebumnobi ha bụ igosipụta nsogbu ahụ dum ma nyezie ahịrịokwu nke chịkọtara ihe osise ahụ.
Mgbe mmeghe ahụ gasịrị, ị nwere akụkụ bụ isi nke edemede gị iji kpuchie. Isi aru nwere ike gafere paragraf atọ mana nke a apụtaghị na ị nwere ike ịkọ akụkọ. Isi okwu nke paragraf ahụ ga-abụ ihe ziri ezi ma kwuo n'ụzọ doro anya azịza nke nsogbu ahụ. Ngwọta ekwuputara ga-abụ:
Oge dị irè.
Ọ ga-edo anya na onye na-agụ ya na a ga-edozi ihe ngwọta dị mfe.
Onye na - agụ ya maara na eziokwu ahụ ga - edozi nsogbu ahụ ma ọ bụrụ na etinyere ya. (ihe atụ ga-arụ ọrụ zuru oke ebe a)
Dịka onye edemede, ị kwesịkwara ịkpachara anya mgbe ị na-ekwupụta azịza ya n'ihi na enwere ike ịjụ azịza ya. Maka arụmụka doro anya, ịkwesịrị iji nlezianya tụlee ihe ndị megidere atụmatụ gị ma merie ya n'ụzọ ezi uche dị na ya.
Ozugbo imesiri iwebata na isi aru, ikwesiri ileba anya na nkwubi okwu. Ederede ọ bụla ga-enwerịrị nkwubi okwu zuru oke ma ọ bụghị ya, enwere ike imebi edemede ahụ dum. Mmechi ya nwere ike ịbụ otu paragraf ma ọ bụ karịa. Fọdụ echiche ndị dị irè maka nkwubi okwu magburu onwe ya bụ:
Gwa ndị na-agụ akwụkwọ gị ihe kwesịrị ime.
Kọwaa mmetụta nke mmejuputa atumatu gị.
Enwere ike inye ihe atụ dị adị n'ezie ma ọ bụrụ na ejirila atụmatụ ahụ tupu oge eruo.
A ga-ekwupụta akaebe ọkachamara, ọnụ ọgụgụ, eziokwu.
Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-eji ihe atụ sitere na ịntanetị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ maka ide edemede nsogbu na ngwọta. Nke a bụ ihe atụ si n'akụkụ anyị nwere ike inyere gị aka ịghọta na ide edemede ka mma:
Ọrịa na-emetụta akparamàgwà bụ ihe a na-ahụkarị n'oge a, ọkachasị n'etiti ndị nọ n'afọ iri na ụma. Da mba n’obi, nchekasị, nsogbu mmadụ, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ihe karịrị 50% nke ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ ndị nwere isi mgbaka.
Ajụjụ na-ebilite na “Gịnị bụ ahụike nke uche? ” Ọ bụ nkwenye zuru oke na naanị ọrịa uche na-egosipụta n'ụdị nkwarụ. Nke a abụghị ikpe. A na-ekwu na nzaghachi ọ bụla pụrụ iche ma ọ bụ nke a na-atụghị anya ya nke mmadụ mere n'ihe omume ndị a na-ahụkarị bụ “ọrịa uche.”
Iji maa atụ, nwata nwoke / nwaada nwere ike igosi iwe mgbe ha na ya sere okwu. Ọrịa na-emetụta mmụọ na-emebi ntorobịa anyị na isi ihe kpatara ọrịa ndị dị otú ahụ bụ itinye aka na nne na nna, ihe riri ahụ, na ọnyá ndị nwere ike ịbụ n'ihi ihe ọ bụla.
E nwere ọtụtụ ihe ngwọta maka nsogbu a n'etiti nke atọ ndị na-esonụ nwere ike ịdị na-arụ ọrụ dị mfe. Nke mbu, ndi mmadu gha agha karie oru.
Ha kwesịrị ihi ụra nke ọma ma na-eri ezigbo nri. A ghaghị ibelata nrụgide ha. Mmega ahụ na-enyere aka na nzuzo nzuzo hormonal na-enyere aka belata nrụgide na nchekasị. Ọ na - enye aka ịkwụsị ị addicụ ọgwụ ọjọọ nke ọtụtụ ndị na - eto eto nakweere n'ihi mmụọ dị ala.
Nke abuo, ndi nne na nna kwesiri itinye aka na ndu nwa ha. Ọ bụ oke ọrụ dịịrị ndị nne na nna inyere ụmụ ha aka iji obi ike nagide nsogbu niile kama ịhapụ ha naanị ha n'ọnọdụ dị oke mkpa.
Ha kwesịrị inyere nwa ha aka ịkwụsị ụdị ọgwụ ọjọọ niile. N'ozuzu, ndị nọ n'afọ iri na ụma na-ahụ ọgwụ ndị mara mma na ihe nnọchianya nke klas. Fọdụ ndị nne na nna anaghị elekwasị anya na ụmụ ha ma ọlị na ụfọdụ ndị nne na nna na-etinye aka na-eme ụmụaka iwe.
Ihe nke ato bu na ndi nne na nna kwesiri igbapu nsogbu di na nwunye. Ha kwesịrị ịgwa ụmụ ha banyere ndụ ha. Ọ bụrụ na onye nọ n’afọ iri na ụma dara mbà n’obi, ọ bụ ọrụ dịịrị ndị nne na nna ịgwa ha okwu n’ihi na ikwu banyere nsogbu a na - ewepụta nchekasị ma na - enyere aka ịlaghachi na ndụ.
Afọ iri na ụma bụ oge dị oke mkpa nke ndụ yana njikwa ya dị ka nke na-emebi emebi. Ihe ndị ahụ e kwuru n’elu ga-enyere gị aka imeri onye dị afọ iri na ụma dara mbà n’obi.
Ihe ngwọta enweghị usoro siri ike. Ọ bụcha ihe gbasara oge. Ihe ngwọta ahụ arụ ọrụ maka onye ikwu m ma enwere m olileanya na ngwọta ndị a ga-enyere gị aka.
Site na ihe atụ a dị n'elu, ị nwere ike ịkọwapụta banyere edemede ederede na-edozi nsogbu. Anyị gbalịrị ịdị ka o kwere mee ma nwee olile anya na nke a ga - enyere gị aka ide edemede edemede nsogbu.
Isi ihe ị ga-elekwasị anya bụ na ị ga-agbakwunye nkọwa nkwado atọ maka isi ihe dị na otu paragraf. N'ịbụ onye na-amụrụ ihe, ị ga-echeta iwu ndị ahụ edepụtara n'elu na echefula iburu okwu okwu enyere n'uche.
N’oge nile ị na-arụ ọrụ agụmakwụkwọ, a ga-ekenye gị ọtụtụ ọrụ edemede. Akwụkwọ edemede nsogbu-nsogbu bụ nke akwara kwere. Ọ bụ ọrụ onye edemede ka ọ bụghị naanị ime ka ndị na-ege ntị kwenye ilekọta, kamakwa ime ka ha mee otu ihe.
Nwere ike ịhapụ ndị enyi gị nrụgide nke ịgagharị na ịntanetị maka nke a, dị nnọọ pịa bọtịnụ òkè ma rute ha na njikwa mgbasa ozi ha.
Portal AAUA https://aaua.edu.ng/b/student/ Mmelite Ngwa Ọhụrụ
NYSC Iji Ghaa Igwe batrị anọ (4) na - esote afọ - 2017
Nationslọ Ọrụ Mahadum Mba Ndị Dị n'Otu na Mmemme Na-ahụ Maka Mmekọrịta Na-ahụ Maka Mpaghara Na-atụnyere Usoro 2018/2019 na Ntuziaka Ngwa
WAEC GCE Financial Accounting Ajụjụ 2021 Azịza kacha ọhụrụ
Tinye Ugbu a maka IROKO Partners Ltd Vacancy maka Ahịa Nkwado Ndị Ahịa
Ulo akwukwo uzo di elu nke 15 zuru oke na ntinye akwukwo nke 2020 maka umu akwukwo mba uwa
Nyocha nke Ozizi na Omume nke Nchebe Onwe Gị Na Iwu Mba Nile
Tags: Agba a ikpeazụ Foto, Ederede Nsogbu Nsogbu, Nzọụkwụ Nzọụkwụ na Ihe Nlereanya, Kedu ihe bụ Ngwọta Ngwọta Nsogbu?, Kedu ihe atụ nke Edemede Nsogbu na Ngwọta?
« Ọrụ 30 kacha mma ịkwụ ụgwọ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na America 2021 Mmelite
NCAA Ntughari aka na Ntuziaka maka ndị egwuregwu »
Visadị Akwụkwọ Visa Lottery Brazil 2020/2021 na Otu esi etinye
Iddị Nbanye 2021/2022 nke Maurid Poly HND & Degree
OOU Matriculation Ceremony Ụbọchị 2021/2022 Oge Ọmụmụ
Ọgọst 2021 Nkwupụta Ewe Ewe Ewe Ewe Echiche Ekwu iji gosi otú Ị na -arịọ mgbaghara
Ọgọst 2021 Ozi ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ mara mma maka nne m iji mee nne gị mmemme
Ọdịiche dị n'etiti diplọma ụlọ akwụkwọ sekọndrị na asambodo ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Ernst & Young (EY) Ntughari mmelite 2021/2022 kacha ọhụrụ
Ernst & Young (EY) Vlọ ọrụ Job 2021 www.ey.com
NGO Ọrụ na Nigeria 2021 Lee Ọnọdụ Ọrụ Julaị kacha ọhụrụ
Npower Portal Banye npvn.npower.gov.ng/login 2021/2022 Akaụntụ Nnweta
NGO Ọrụ na Nigeria 2021/2022 Mmelite: Lelee Eliglig chọrọ
General Electric Nigeria Graduate Intern recrutmentment 2017 na-agụsị akwụkwọ Ntuziaka GE na Nchọpụta
Ọnụ ego ezumike na asụsụ Kosovo 2021, ụgwọ visa na ebe ndị njem
www.npower.gov.ng Portal Nbanye Portal 2021 Portal Portal